यि बैंकहरुले सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याजदर, ऋणको ब्याजदर अधिकांशले घटाए! - Info Nepal
INFONPLअर्थ /बाणीज्ययि बैंकहरुले सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याजदर, ऋणको ब्याजदर अधिकांशले घटाए!
यि बैंकहरुले सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याजदर, ऋणको ब्याजदर अधिकांशले घटाए!
काठमाडौं: यि बैंकहरुले सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याजदर, ऋणको ब्याजदर अधिकांशले घटाए! बाणिज्य बैंकहरुले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक ब्याजदर अनुसार धेरै बैंकले आधार दर घटाएका छन् । आधार दरका अनुसार बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि धेरै बैंकको कर्जाको ब्याजदर घटेको हो ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सिइओ अनिल कुमार उपाध्यायले बैंकमा तरलता अधिक रहेकाले अझै ब्याजदर घट्ने बताए । उनका अनुसार यो वर्ष निक्षेपमा १ प्रतिशत र कर्जामा झण्ढै डेढ प्रतिशत ब्याजदर घटेको छ । हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ४७ खर्ब १२ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ भने ४१ खर्ब ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमा बाणिज्य बैंकको हिस्सा बढी छ । बाणिज्य बैंकहरुको मात्रै ४१ ख्र्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै बाणिज्य बैंकहरुको मात्र ३७ खर्ब ५ अर्ब रहेको छ । बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर
आज शुक्रबार फेरि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
आज बिहिवार पनि ह्वात्तै घट्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
बिदेश मा हुनेको लागि खुसिको खबर ह्यतै बड्यो बिदेशी मुद्रा को भाउ यस्तो छ आजको भाउ हेर्नुहोस् !
दक्षिणकाली माता लाई ॐ लेखि एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आजकाे राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ । आज यी राशी हुने…..